Soo dejisan Defraggler 2.22.995 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Defraggler
Defraggler – software ah in defragment disk adag ka shirkadda Piriform. Waxyaabaha ugu weyn ee software-ka waa awooda in defragment faylalka iyo fayl u gaar ah. Defraggler taageeraa nidaamka file sida NTFS iyo FAT32 ah. Software waxay bixisaa fursad si ay u falanqeeyaan drive adag oo muujiya liiska faylasha burbursan. Defraggler sidoo kale soo bandhigay warbixin faahfaahsan oo ku saabsan shaqada ee drive ee muddo cayiman.
Defragments drives, fayl iyo files
Falanqaynta disk adag
Macluumaad ku saabsan Detail disk
Soo dejisan Defraggler
Faallo ku saabsan Defraggler
Defraggler Xirfadaha la xiriira
jv16 PowerTools – qalab adag oo qalab ah oo ay ka mid yihiin yutiilitida si loo habeeyo, loo xakameeyo, loo nadiifiyo loona habeeyo nidaamka.
Dxtory – barnaamij shaqeynaya si software looga soo qaado shaashadda kombiyuutarkaaga. Software-ka waxaa ka mid ah algorithms-ka khaaska ah ee ka hortagaya saameynta xawaaraha codsiyada inta lagu jiro diiwaankooda.
IntelliJ IDEA – bay’ad horumarineed oo caqli gal ah ee softiweerku wuxuu diiradda saaraa waxqabadka iyo u-fiirsashada soo-saare ee howlaha muhiimka ah ee muhiimka ah.